July 20, 2010 by chowutyee
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 35 Comments
yummy….i really wanna eat new styl of these dishes…i miss urs foodsahintahint…will try again…to sucess 😉
သေချာတာပေါ့ ခုတောင် ၀လာလို့ ၀ိတ်လျှော့ခိုင်းနေရတယ်.. 🙂
ဟီးဟီး… အဲဒါလောက် ပြောတော့ ပြန်လာရင် လုပ်ကျွေးပါမယ် သယ်ရင်းရယ်.. 🙂
မချောရေ…. ဂျူးလိယက် ၀တ္တုရေးလိုက်၊ ဟင်းချက်လိုက်နဲ့ အားကို မအားပါဘူး.. မချောစားချင် ဂျူးလက်လက်ရာကို အစွမ်းပြချင်ပါသေးတယ်.. 🙂
ွှThanks you too! 😉
ကြက်တောင်ပံအဆာသွပ်ကတော့ ရှယ်ပဲ။ နောက် ကြက်ခြေထောက် အဆာသွပ် လုပ်နည်းလည်း အဲလို အဆင့်ဆင့်ရေးပေးပါအုံးနော်… ဟီးဟီး (ကြက်တောင်ပံ အရိုးထုတ်နည်းသိသွားလို့ အပျော်လွန်ပြီးနောက်တာပါ) 😀
ဟေမာနှောက်လိုက်လို့ လန့်တော်သွားသေးတယ်.. 🙂
font ရှိရက်နဲ့ မရရင်တော့ Mozilla ရဲ့ Tool Menu-> Optins-> Content Tub-> Font&Colors မှာ zawgyi font ကိုရွေးလိုက်ပါ 🙂
hee thanks leo! 🙂
မ၀တ်ရည်ရေ.အရိုးထုတ်နည်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ. မ၀တ်ရည် ချက်နည်းပညာလေးတွေကို အတုခိုးပီး ထားထား မနေ့က လုပ်စားဖြစ်တယ်.. သိပ်ကောင်းတဲ့အရသာဘဲ.. ကျေးဇူးပါနော့်.. 🙂
ထားကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်.. 😉
Thanks to Ma Yamin!! 🙂
ကြက်တောင်ပံ ဟင်းကိုချက်ကြည့်ပါ.. အရမ်း စားလို့ကောင်းပါတယ်.. နောက်ဟင်းတွေလည်း ချက်ကြည့်ပါအုန်းနော်.. 😉
အင်တာနက် ဒီထက် ပိုမြန်လာရင်တော့ ၀တ်ရည်လည်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပါ တွဲတင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်အင်တာနက်က သိတဲ့အတိုင်း အရမ်းနှေးတော့ အဆင်မပြေလို့ပါ.. 😛
Shar yay, Sorry about I don’t have english website. I did this site for Myanmar. Thanks you! 😀